China Cryolipolysis Jidhka slimming Mashiinka qaboojinta baruurta oo leh afar gacan oo isku mar ah warshad iyo soosaarayaal |KEYLASER
Jidhka Cryolipolysis ee Mashiinka Qaboojinta Dufanka oo leh afar gacan oo isku mar wada shaqeeya
Codso gacanta meesha la beegsanayo,bilow cryo-qaboojinta si aad u gaarto heerkulka bartilmaameedka ah. Unugyada baruurta ee aagga bartilmaameedku waxay bilaabaan inay ka jawaabaan cryo-crystalization.Kadib daawaynta, unugyada baruurta waxay gaadhaan dhimasho noole waxaana laga saaray habka dheef-shiid kiimikaadka. Kadibna waxay gaaraan fatremoval .
1.Four gacanta oo leh shaashad, waxay shaqayn kartaa waqti isku mid ah
2.Two silikoon gacan-qabasho: iyadoo la isticmaalayo silikon caafimaad, jilicsan si ay u dareemaan macaamiishu raaxo inta lagu jiro daaweynta
3.Two 360 ° qaboojiyaha qaboojiyaha: 360 ° qaboojinta, saamaynta qaboojinta aad u fiican
1. 360° Taxanaha barafku waxa uu leeyahay lix badbaado oo si toos ah u ogaanaya, taas oo gelinaysa badbaadada meesha ugu horeysa.
2. Mashiinku wuxuu ku qalabaysan yahay 12 dareeraha socodka biyaha / heerkulka si loo ogaado waqtiga dhabta ah si loo hubiyo shaqada caadiga ah ee mashiinka.
3. Hal badhan oo si toos ah u shaqeynaya nadiifinta tooska ah, iyo buuxinta tooska ah ee buuxinta biyaha iyo shaqada, ku habboon isticmaalka maalinlaha ah iyo dayactirka.
4. Iyadoo bamka aamusan ee Japan, qaylada ayaa la dhimay 30%, hagaajinta dareenka isticmaalka.
1.Four hawlgalka afar gacan, shaqayn kara waqti isku mid ah
2.Vacuum power: 100KPa(ugu badnaan)
3.Daawaynta Heerkulka: -10℃-+5℃
4.Waqtiga Daawaynta: 1-60min
Interface 10.4 inch midabka taabashada
Codsiga Slimming Jirka
Qabashada 4 gacan-qabsi ayaa isku mar shaqeeya
Heer kulka daawaynta -10℃-+5℃
Waqtiga daawaynta 1-60 daqiiqo
Heerka nuugista 1-6
La soco 8pcs
Q1.Waa maxay farqiga u dhexeeya cryo hore iyo silikoni cryo?
Re: Marka hore, Silicone cryo waxay qabataa kulaylka ugu horreeya ka dibna qaboojinta, daawaynta ayaa natiijadeeda ka sii fiican, cryo duug ah oo kaliya qaboojinta.Marka labaad: Silicone cryo waxay isticmaali kartaa iyada oo aan lahayn xuubka barafaysan, cryo duug ah waa in la isticmaalo;Marka saddexaad, Silicone cryo waxay si cad u aragtaa qoto dheeraanta nuugista, ka-hortagga barafka, maqaarka u fiican.
Q2.Sida loo shaqeeyo mashiinka, waa maxay koorsada daaweyntu?
Re: Buug-yaqaanka isticmaalaha, fiidiyoowga hawlgalka iyo borotokoolka ayaa ku siin doona, fadlan ha sameyn'Walaac, 1-2 daawaynta sida koorsada, 1-2 bilood inta u dhaxaysa.
Q3.Immisa sano oo dammaanad ah oo aad bixisay?
Re: 24 bilood (kuma jiraan waxyeellada aadanaha), dayactirka nolosha iyo taageerada farsamada.
Q4.Sidee loo sameeyaa haddii mashiinku jabo inta lagu jiro shixnadda?
Re: Dhammaan mashiinnada lagu soo raray caymis, mar haddii waxyeello soo gaarto inta lagu jiro shixnadda, shirkaddayadu waxay kaa caawin doontaa inaad dalbato waqtigii loogu talagalay!
Q5.Sideen wax uga qabanaa haddii mashiinku u baahan yahay inuu dayactiro?
Re: Waxaan leenahay xirfadle ka dib waaxda adeegga iibka si ay kaaga caawiyaan in aad xalliso dhibaatada online iyo video, haddii dhibaatadu aan la sloved online, waxaan kuu soo diri doonaa dayactirka qaybaha dayactirka, haddii kale waxaad heli doontaa qalab cusub oo lacag la'aan ah.
Hore: Laysarka tooska ah ee diode conbine yag laser ipl shr elight rf mashiinka hawlaha badan
Xiga: Ems wuxuu sawiraa Jidhka Isku-xidhka Muruqyada Jidhka xooggan ee Mashiinka wax lagu khafiifiyo